BQ Aquaris VS iyo VS Plus: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Daahfurka | Androidsis
Eder Ferreno | | Bq, Mobiles
BQ waa shaki la'aan astaanta ugu muhiimsan ee Isbaanishka ee suuqa. Waxay kaloo mas'uul ka yihiin samaynta taleefanno tayo leh oo leh awood weyn. 2017 wuxuu ahaa sanad muhiim ah oo ay ku guuleysteen inay xoogaa ka sii dhisaan suuqa. Hadda, waxay isu diyaarinayaan inay soo saaraan taleefanno cusub sannadka 2018 -ka. BQ Aquaris VS iyo VS Plus waa magacyada noocyada kala duwan ee astaanta.
Waxay la yimaadaan isbeddello marka loo eego qaababkii sannadkii hore. Maxaa ka sii badan, kuwan BQ Aquaris VS iyo VS Plus waxay suuqa ku dhufteen qiimo aad u jaban. Go'aankan waxay ku doonayaan inay ku soo dhawaadaan dhagaystayaal badan, gaar ahaan dhallinyarada. Maxaan ka filan karnaa aaladaha?
Waxaa jiray waxoogaa isbeddel ah oo lagu sameeyay Aquaris V sannadkii hore. In kasta oo BQ ay doonaysay inay ilaaliso qaar ka mid ah dhinacyada u shaqeeyay sida ugu wanaagsan oo aan la beddelin. Laakiin, sidoo kale la qabsiga labada moodeel waxa ay rabaan macaamiisha sannadka 2018. Waxaan uga hadlaynaa nooc kasta si gaar ah.
Waxaan ku bilaabeynaa kan koowaad ee labada moodel. Marka la barbardhigo qaabkii sanadkii hore waxaa aad u yaraa isbedelada. Midka ugu weyn wuxuu diiradda saaraa processor -ka, maadaama ay doorteen mid kale. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jira isbeddel xagga kaydinta. Kuwani waa Tilmaamaha BQ Aquaris VS:
Nidaamka hawlgalka: Android 7.1.2 Nougat
Screen: 5,2 inch HD
GacaliyeQalabka: Snapdragon 430
Kaydinta Gudaha: 32GB / 64GB
Cámara trasera: 12 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Kaameerada hore: 8 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Batariga: 3.100 Mah oo leh lacag degdeg ah
kuwa kale: LTE Band 20, akhristaha faraha
Cabbirada: 148,1 x 73 x 8,4mm
Peso: 165 garaam
Sidaad arki karto, isbeddelka ugu weyn wuxuu ku jiraa processor -ka cusub. Astaanta ayaa sii wadata inay ku sharadato processor -ka Snapdragon, in kasta oo markan ay tahay 430. Sidoo kale, isku -darka RAM iyo kaydinta ayaa is -beddelay. Qalabkan cusub wuxuu bixiyaa RAM badan iyo kaydinta labada noocba marka loo eego BQ Aquaris V.
Hadda waxaan aadnaa qaabkii labaad ee summaddu soo bandhigtay. Waa walaalkii ka weynaa aaladdii hore. Sida moodalka kale, isbeddellada marka la barbar dhigo telefoonkii sannadkii hore ma badna. Waxaa jira mar kale isbeddel ku yimaad processor -ka iyo waliba isku -darka RAM iyo kaydinta. Markaa waa isbeddelo aad u caqli badan. Kuwani waa tilmaamaha buuxa ee BQ Aquaris VS Plus:
Screen: 5,5 inch FullHD
Kaydinta Gudaha: 64 GB
Batariga: 3.400 Mah oo leh lacag degdeg ah
Cabbirada: 152,3 x 76,7 x 8,4 mm
Peso: 183 garaam
Hal faahfaahin oo iga niyad jabisay labada moodelba waa inaysan la imaan Android Oreo sidii caadiga ahayd.. Wax iga yaabiyay. Laakiin, waxaan rajeynayaa in cusboonaysiinta ay gaari doonto labada moodel oo aan aad u fogeyn. Waa faahfaahin si loo hagaajiyo shirkadda.
Labadan taleefan ee cusub waxay u taagan yihiin jihada cusub ee Aquaris V ee sumadda Isbaanishka. Maaddaama ay doorteen moodallo waxoogaa la cusbooneysiiyay iyo saamiga qiimaha-tayada oo la isku hagaajiyay. Markaa moodooyinkaan waxay ku gaari karaan dhagaystayaal ballaaran. Gaar ahaan dadka isticmaala da 'yarta labadooduba aad bay u jeclaan karaan.
El BQ Aquaris VS waxaa lagu heli doonaa qiime dhan 179,90 euro qaabkeedii caadiga ahaa. Nooca taleefanka ee leh 4GB ee RAM iyo 64GB ee kaydinta ayaa lagu qiimeyn doonaa 199,90 euros. Halka BQ Aquaris VS Plus laga heli doono a qiimaha 219,90 yuuro.
Qiimayaashan Waxay u taagan yihiin dhimis dhan 30 euro marka loo eego qaababkii sanadkii hore. Markaa waa inay noqdaan kuwo aad u heli kara dadweyne badan. Kuwa danaynaya inay iibsadaan waxay ku samayn karaan websaydhka shirkadda ama meelaha BQ. Aquaris VS waxaa lagu heli karaa dahab cad oo waa la iibsan karaa hadda. Kuwa danaynaya Aquaris VS Plus waa inay sugtaa ilaa Febraayo 16. Maxaad u malaynaysaa taleefanadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » BQ Aquaris VS iyo VS Plus durba waa rasmi, ogow qeexitaanadooda
Kalandarka Google wuxuu gaarayaa 500 milyan oo soo degsasho ah
Google waxay hagaajineysaa huteelka iyo mishiinka raadinta duulimaadka ee Android